यी हुन् संसारमै सबैभन्दा सुन्दर अनुहार भएकी महिला, विज्ञानले नै प्रमाणित गरिदियो - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यी हुन् संसारमै सबैभन्दा सुन्दर अनुहार भएकी महिला, विज्ञानले नै प्रमाणित गरिदियो - खबर प्रवाह
काठमाडौं । संसारमा सबैभन्दा सुन्दर अनुहार कसको छ ? यो प्रश्नको उत्तर विज्ञानले दिएको छ । अमेरिकी अभिनेत्री एम्बर हर्ड विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् । स्टेट अफ द आर्ट फेस म्यापिङ डाटाका अनुसार उनले सौन्दर्यको मामिलामा किम कार्दशियन र बेलायती सुपरमोडल केट मोसलाई पनि उछिनिसकेकी छिन् ।
एम्बरलाई लन्डनका सर्जन डा. जुलियन डे सिल्भाले परीक्षण गरेका थिए। फेसियल म्यापिङ प्रविधिबाट यो परीक्षण गरिएको उनले बताए । तस्बिरमा उनीहरुको आँखा, आँखिभुइँ, नाक, ओठ, चिउँडो, बङ्गारा र अनुहारको आकार नापिएको थियो । अनुहारको १२ मार्कर बिन्दुहरू विश्लेषण गरियो। एम्बरको अनुहार फीको ग्रीक अनुपातमा ९१.८५ प्रतिशत सही छ।
ग्रीकहरू विश्वास गर्छन् कि सबै प्राकृतिक चीजहरूको अनुपात हुन्छ। संसारको सबैभन्दा सुन्दर अनुहारको गोप्य सूत्र पनि यसैमा रहेको उनीहरुको विश्वास छ । लन्डनमा सेन्टर फर एडभान्स्ड फेसियल कस्मेटिक एन्ड प्लास्टिक सर्जरी चलाउने डा. जुलियन डे सिल्भाले भने-हामीले नयाँ कम्प्युटर म्यापिङ प्रविधि प्रयोग गर्छौं। यस प्रविधिको माध्यमबाट हामीले सुन्दर अनुहारको पछाडि केही रहस्य पत्ता लगाएका छौं।
परिवारवादको ट्याग हैन, म फिल्डमै उत्रन्छु : सृष्टि दाहाल केसी
हेटौँडामा मेयरको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासमा एमाले, सहमति नजुटेपछि एमालेद्वारा बैठक बहिस्कार